BEKASY JOHNFRIEND: Hitantanana ny FITEFA mandritra ny telo taona.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mai 2, 2017
Distrika sivy no mandrafitra ny Fikambanan’ny Teraky ny Faritany Antsiranana (FITEFA) monina eto Antananarivo. BEKASY Johnfriend no filoha vaovao mitarika izany. Omaly 01 may 2017 no notolorana tamin’ny fomba ofisialy ny maha filoha sy ireo mpikambana ao anatin’ny birao hitantanana mandritra ny telo taona. Ny fampandrosoana ny faritany Antsiranana no tanjon’ny fikambanana fa tsy hanao politika velively. “Ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpikambana no laharam-pamehana ho an’ny fikambanana hatramin’izay 39 taona nijoroany ara-dalana izay”, hoy I BEKASY nandritra ny lahateniny tamin’ny fihaonamben’ny FITEFA omaly.
Sehatra maro toy ny fanampiana ny fianaran’ireo zanaky ny faritra mianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, ny fampiroboroboana ny distrika tsirairay…no iantsorohan’ny fikambanana.
Efa mihoatra ny 2000 ny mpikambana ao anatin’ny FITEFA ka ho famaritana ara-dalana ny isan’izy ireo, manana vina hizara karatra maha mpikambana ny fikambanana. Fanamby lehibe ho an’ity birao vaovao ity ihany koa ny fananganana ivon-toerana lehibe ho an’ny fikambanana, eto Antananarivo.
‹ FARITRA ATSINANANA: Mamokatra voly fanondrana.	› MANDA SA : Vokatra voakajy sy tsara kalitao no atolony ho an’ny mpitsidika ny « vitrine économique Toamasina ».